नेपाल आज | के तपाईंको गालामा डिम्पल छ ! पढ्नुहोस् कतै बिरामीको लक्षण तै होइन?
के तपाईंको गालामा डिम्पल छ ! पढ्नुहोस् कतै बिरामीको लक्षण तै होइन?
एजे‍न्सी । डिम्पल पनि बिरामीको कारण हुन सक्छ भन्ने तपाईंलाई थाहा छैन होला । डिम्पल जुन हाम्रो गालामा पर्छ, यसलाई देखेर हामी एकदमै राम्रो ठान्छौँ । तर हामीहरूलाई थाहा नहुन सक्छ डाक्टरहरूले यसलाई बिरामीको लक्षण पनि मान्ने गर्छन् । फेरि प्रश्न उब्जिन सक्छ, बलिउडका स्टारहरू जसको गालामा डिम्पल पर्छ, के उनीहरू पनि बिरामी हुन् त ! आउनुहोस बुझौँ, डिम्पल पर्नु कुन प्रकारको बिरामी हो ?
डाक्टरहरूका अनुसार वास्तवमा डिम्पल पर्नुको कारण अनुहारमा मांसपेशी खुम्चिन हो । कुनै कारणले हाम्रो अनुहारको मांशपेशी छोटो हुन्छ, अनि हामी हाँस्दा थोरै खिचिन्छ, यस्तोमा गालामा खाल्डो पर्छ ताकि खाली भागलाई पूरा होस् । डिम्पल आमाको पेटमा हुँदाबाट सुरु हुने डाक्टरहरू बताउँछन् । सबक्युटेनियस कनेक्टिभ टिसुमा कुनै प्रकारको परिवर्तन आयो भने डिम्पल पर्न सक्छ ।
केही व्यक्तिहरूको बाल्यकालदेखि नै डिम्पल देखिन्छ, तर उनीहरू ठूला भएपछि त्यो डिम्पल गायब हुन्छ । बालबालिकाको गालामा रहेको बेबी फ्याट खत्म हुन्छ अनि डिम्पल देखिन बन्छ हुन्छ । डिम्पललाई औपचारिक रुपमा जेलासिन भन्निन्छ, जुन हाम्रो शरीर कुनै पनि भागमा देखिन सकिन्छ । धेरै चिनेको गालाको डिम्पल हो । यो हाम्रो शरीरका मांसपेशीको कमीले गर्दा हुने डाक्टरहरूको भनाइ छ ।